Caalamka, 01 July 2017
Shiinaha oo ka Horyimid Hub Mareykanka uu ka Iibinayo Taiwan
Shiinaha ayaa muujiyey sida aanu ugu qanacsaneyn hub ku kacaya 1.4 bilyan oo dollar oo Mareykanka uu ka iibinayo Taiwan.
Muwaadiniinta Yurub ee UK oo Deganaansho loo Ogolaanayo
Soomaali oo Noqdey Ergeyga Suugaanta Edmonton
Magaaladda Edmonton ee dalka Kanada waxaa ergeyga degmada ee suugaanta loo magacaabey Axmed Maxamuud Cali oo loo yaqaan Axmed Knowmadic.
Xulufada Carabta oo u Hanjabay Qatar
Dawladaha xulufada Carbeed ee horkacaya in cilaaqaadka loo jaro dalka Qatar ayaa mar kale ku baaqay in dalka Qatar uu aqbalo qodobo 13 ah oo ay hore ugu gudbiyeen, hadii kale ay tallaabo ka qaadayaan.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Venezuela oo la Rasaaseeyey
Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in diyaarad helicopter ah oo boolisku lahaa oo la dhacay ay rasaas ku furtay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Maxkamadda Sare ee dalkaas.
Ciidamad Ciraaq oo ku sii Siqaya Mosul
Abaanduule ku xigeenka isbahaysiga uu horseedka ka yahay Mareykanka Sareye Gaas Rupert Jones ayaa sheegay maanta in aysoo dhawaatay xureeynta kama dambeysta ah magaalada Mosul.
Barnaamijka Dhacdooyinka todobaadka waxaa inala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan.